mana daawan doono danahayaga istaatiijiyadeed oo wiiqmaya sharci darrada ka jirta Soomaaliya awgeed
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya oo Sheegay in Arrimaha Soomaaliya aysan Gacanta ka Laaban doonin.....
".... mana daawan doono danahayaga istaatiijiyadeed oo wiiqmaya sharci darrada ka jirta Soomaaliya awgeed...." Moses Wetangula,
Tarjumadii: SomaliTalk.com | June 7, 2009
Moses Wetangula oo ah wasiirka Kenya u saxiixay heshiiskii Is-afgarad ee ay la galeen Soomaaliya ayaa sheegay in aysan daawan doonin danahooda istaatiijiyadeed ee wiiqmaya, sababtoo ah ayuu yiri sharci darrada ka jirta Soomaaliya awgeed. Hadalkaas waxa uu ku sheegay waraysi uu June 5, 2009 siiyay Telefishanka NTV oo ay leedahay Nation Media ee Kenya.
Warbixintii TV-ga, cod iyo Video hoos akhri, dhegesyo ama daawo.
Moses Wetangula, Wasiirka Arimaha Dibadda Kenya. Isha: NTV
"Kenya hadda gacanta kama laaban doonto, mana daawan doono danahayaga istaatiijiyadeed oo wiiqmaya sharci darrada ka jirta Soomaaliya awgeed. Haddii aan ogolaano in sharci darradu ka sii socota Soomaaliya, halkaas oo derejada sharci darradu ay gaar meel aad u daran, bal eeg qiimaha ku kacaya burcad badeeda, waxaa jirtay waqti in qiimaha caymiska maraakiibta imanaya dekeda Mombasa Kenya waxay kor u kaceen ilaa boqolkiiba 40%, qiimahaas kor u kacay waxa uu saameeyey qof kasta oo adeegsanaya badeecada. Waxaan raad ku yeelanay deriskayaga," ayuu yiri wasiirka Arrimaha dibadda Kenya.
NTV oo warysiga qaaday waxa uu sheegay in Kenya ka qayb qaadanayso wafti ka socda Midowga Afrika iyo IGAD oo arrimaha Soomaaliya u tegeya Xarunta Qarammada Midoobay ee New York si ay ula kulmaan Xoghayaha Guud ee QM Ban Ki-moon si cunaqabatayn loo saaro xooggaga ka soo horjeeda xukuumadda uu hogaamiyo Sh. Shariif Sh. Axmed.
Mr. Wetangula oo waftiga ay dirayaan ka hadlayey waxa uu yiri: "Waxaan abaabulay oo diyaarinay in aan ballan la dhiganay xoghayaha guud ee QM, waxaan sidoo kale la kulmi doonaa Golaha Ammaanka, waxaana kala hadlaynaa suurtagalnimada in cunaqabataynta la saaro dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya ee ay ka taliyaan qabqablayaasha dagaalka iyo dembiilayaasha Alshabaab."
NTV oo warbixintiisii sii watay waxa uu sheegay: Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamada Midowga Afrikaanka oo aan aad u hubaysnayn, Watangula waxa uu doonayaa in halkaas loo diro ciidan badan, waxana uu ku baaqayaa in cudud militari la adeegsado si loo taageero dawladda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya oo arrintaas ka hadlayay waxa uu yiri: "Waxaan rajaynayaa in hurdada laga kaco oo la sameeyo sidii ay Tanzania ka samaysay Uganda, wixii Sudan iyo Tanzania ay dhawaan ka sameeyeen Comoros - kaxay ciidamadaada oo u dir gudaha si aad u xallisid dhibaatada. Comoros hadda waa nabad, waad aragtay sida Uganda ay uga gudubtey maalmihii Iidi Amiin, waxay ila tahay in ay shardi ku tahay Afrika in ay hurdada ka kacdo oo ka qaadato kaalinteeda saxda ah oo taageeraan xubnahooda".
Sidaas waxaa qoray buugga "Rescuing nationals abroad through military coercion and intervention on grounds of humanity" qore: Natalino Ronzitti 1985, bogga 104.
FG: Xooggii Militari ee Tanzania ku gashay Uganda waxa uu bilowday January 20, 1979. Ciidamada Tanzania waxay garab siiyeen jabhad ka soo horjeedey madaxweynahii Uganda ee xilligaas Iidi Amiin. Bishii March 27, 1979 ayaa madaxweynahii Tanzania Nyerere waxa uu ku dhawaaqay in ay in dagaal laba furin ah lagu furay Uganda. April 11, 1979 ayaa jahbadii oo garabsanaysay militariga Tanzania waxay gaareen caasumada Uganda ee Kampala, sidaasna uu xukunkii kaga dhacay iidi Amiin Dada. Waxaa taariikhdu xustaa in madaxweynahii Tanzania uu ciidankiisa u geliyay Uganda si uu uga aar goosto Iidi Amin oo hore (September 1978) u weeraray Tanzania. Waxaa aad u cajaa'ib badan in Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Kenya (ee hadda June 2009) uu tusaale u soo qaatay in la sameeeyo ficilkii ay Tanzania ku weerartay Uganda. Laakiin xaqiiqadu ay taha in xilligaas (1978-1979) in Kenya iyo Lybia oo keliya ay ahaayeen dalalka sida khaaska ah uga soo hor jeedey in Tanzania weerarto Uganda. Sidaas oo kalena ka soo horjeedey markii Uganda weerartay Tanzania. (Iidi Amin waxay uu 16 August 2003 ku geeriyooday Sacuudi Careebiya).
Waraysigii NTV waxa kale oo uu Wetangula kaga hadlay xaaladda Jasiiradda Migingo ee ay isku haystaan Kenya iyo Uganda.
"Xasilooni ayaa halkaas ka jirta, calankii Uganda halkaas waa laga dejiyay, waxaa halkaas ku sugan lix askari oo boolis ah, saddex Kenyan ah iyo saddex Uganda ah, kuwaas oo ku hawlan arrimaha kala dambaynta. Wax shaki ah haba yaraatee igagama jiro marka la eego akhbaarta la hayo ee taariikhiga ah in Migingo ay soo xigto dhanka Kenya ee xadka," ayuu yiri.
Kenya iyo Uganda waxaa muranka ka dhex dhaliyey dhul ballaciisu yahay 240 mitir (waa fogaan ka yar rubuc kiiloomitir) oo ah haro-biyood. Haddii aan jalleecno dhanka Soomaaliya waxaa Kenya ay markii hore dhul-badeedka Soomaaliya ka cabiratay 38,000 km2, markii ay aragtay madaxda DFKMG in aysan taas ka hadlayna ay la saxiixatay "is-afgarad" muran gelinaya dhul-badeedka Soomaaliyeed, kaddibna Qarammada Midoobay u gudbsatay cabir muujinaya in ay badda Soomaaliya ka calaamadsatay ugu yaraan 116,000 km2. Taas markii ay samaysanaya ay madaxda Soomaaliyeed bilaabeen in ay is-afgaradkaas difaacaan.
Waxaa muhiim ah in si gaar ah loo dhuuxo arrinta ay Kenya cuskanayso marka ay la xaajooneyso Uganda, waxay tiri waxaa "Jira akhbaar iyo khariidado ku simaan sannadkii 1926" oo Kenya ku doodeyso in ay muujinayaan in jasiiradda Migingo aysan lahayn Uganda ee ay leedahay Kenya. Haddaba maxaa madaxda Soomaaliyeed u diiday in ay Kenya xusuusiyaan Heshiiskii Talyaaniga-Ingriiska ee 1924 oo si qeexan u kala calaamadiyay badda Kenya iyo Soomaaliya, sidaa daraadeedna in muranka jiraa uu yahay dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan NFD oo ay gumaystaan ee taariikhdu sida qeexan u qorto.
June 4, 2009 ayay ahayd markii Jariidadda East African Standard ay qortay war cinwaankiisu ahaa "Kenya iyo Somalia oo Raadinaya Xallinta Muran Dhuleedka" waxayna ku xustay in Heshiiska xuduudda badda u dhaxaysa labada dal (Somalia-kenya) in ay ku qoran tahay: "Xadaynta qalfoofka qaaradda ee u dhaxaysa Jamhuuriyada Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya weli lama xallin. Arrintaas aan la xallin waxaa loo tixgalinayaa muran badeed."
Laakiin, ayey tiri jariidaddu, Wasiirka Arrimaha dibadda Kenya Moses Wetangula waxa uu diiday in muran u dhaxeeyo labada dal. "Ma jiro wax muran ah haba yaraatee oo u dhaxeeya annaga iyo Soomaaliya. Is-afgaradka MoU waxaa la saxiixay ayadoo laga duulayo niyad wanaag ku salaysan danaha labada dal," ayuu yiri (Wetangula) June 3, 2009 kaddib markii uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke (oo booqasho ku joogay Kenya).
Shirkii Jaraa'id ee June 3 waxa kale oo wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya uu ka sheegay in "Waftiga u ambabaxaya Qarammada Midoobay waxaa hogaaminaya Ethiopia, waxaana la socda Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya oo xubin ka ah waftiga, xubin ka socda Kenya oo ah isku dubaridaha IGAD u qaabilsan Soomaaliya iyo IGAD agaasimaha guud ee Eng. Mahbuub. Waxaan iyaga u diraynaa New York si ay ula kulmaan xoghayaha guud (ee QM) iyo sida aan u malaynayo golaha ammaanka si ay ugala hadlaan su'aasha ku saabsan waxa ay IGAD iyo AU ay soo agaasimeen oo ku saabsan Soomaaliya."
Hadalkii Watangula ka dhagayso halkan ama hoos ka daawo..
Ethiopia waa dalka labaad ee gumaysta dhul Soomaaliyeed, isla mar ahaantaasna xasuuq ba'an u geytay shacabka Soomaaliyeed, ayna colaad soo jireen ah u dhaxayso oo ku saabsan dhul iyo dad. Waxaa jirta in 1964 heshiis is gaashaan-buuraysi dhexmaray Kenya iyo Itoobiya, heshiiskaas oo ku saabsnaa iska difaacidda Soomaaliya (oo ay labadoodaba gumaystayaashii siiyeen dhul Soomaaliyeed). Heshiiskaas isgaashaan-buuraysiga waxay Kenya iyo Itoobiya cusboonaysiiyeen 1980. Waxa kale oo ay markale sii cusboonaysiiyeen August 28, 1987.
DFKMG iyo Kenya waxay April 2009 kala saxiixdeen heshiis ay DFKMG ugu yeerto Is-afgarad, laakiin Kenya ku tilmaantay Heshiis, kaas oo ku saabsanaa badaha.
Qoraal ay Kenya faafisay April 7, 2009 ayay ku sheegtay in xafladdii saxiixa heshiiska ay ka dhacday xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda (Kenya ee Nairobi) waxaa dadkii goob joogga ka ahaa ka mid ahaa Amb. Longve Hans Wilhelm oo ah lataliyaha gaarka ah ee Norway wasaaradeeda Arrimaha Dibadda iyo Ms. Rina Kristmoen oo ka socotay Safaaradda Norway ee Nairobi. Sidoo kale waxaa goobta joogay Mr. Thuita Mwangi oo ah Xoghaynta Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya, Amb. Ben Ogutu oo ah Agaasimaha arrimaha siyaasadda iyo Mr. James Kihwaga oo ah Madaxa Qaybta Sharciga (Qaanuunka) Kenya. Warka Kenya ma sheegin cid ka socotay Soomaaliya oo goobta joogtay oo aan ka ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah wasiirka Soomaaliya saxiixay.
Laakiin, May 27, 2009 ayaa Prof. Ibbi oo ah ra'iisuwal wasaare xigeenka DFKMG, waxa uu sheegay in goobta saxiixu ka dhacay uu joogay Shariif Xasan Sheikh Aaden oo ah wasiirka maaliyadda DFKMG ahna ra'iisul wasaare xigeen.
Kenya oo Noqotay Dalka Saddexaad ee ugu Musuqmaasuqa Badan Dalalka Afrika ee Saxaraha ka Hooseeya (Sub-Saharan Africa)
Cilmi baaris ka kooban 40 bog oo ay samaysay Transparency International (TI) oo ay su'aalo ku waydiisay dad tiradoodu kor u dhaaftay 73,000 qof oo u dhashay 69 dal oo adduunka ah ayay ku sheegtay in sannadka 2009 marka laga hadlayo Qaaradda Afrika inta ka hoosaysa Saxaraha in Kenya ay noqotay dalka saddexaad ee ugu musuqmaasuqa badan. (Labada dal ee Afrika ee musuqmaasuqa kaga horeeya Kenya waxaa warbixintu ku sheegtay Cameroon iyo Ghana) .. Cilmi baarista oo la faafiyay June 3, 2009 Ka Eeg Halkan.
Waxaa warku xilligaas sheegay in dakhliga cashuurta loo qaadayo Dawladda Federaalka ee laga qaadayo alaabada ama badeecadda laga dhoofinayo Kenya ay gudaha Kenya ku qaadayso laanta Dakhliga Kenya ee loo yaqaan KRA (Kenya Revenue Authority).
7,000 Somali refugees fleeing to Kenya monthly
Faafin: SomaliTalk.com | June 7, 2009
Madaxweynaha (DFKMG) Sheikh Sharif Ahmed (Midig) oo la fadhiya wasiirkiisa Maaliyadda Sharif Hasan Sheik Adan, (Bidix) xilli ay shir jaraa'id ku qabteen xarunta madaxtooyada Villa Somalia ee Muqdisho June 4, 2009, markaas oo uu wacad ku maray in uu sii wadayo la dagaalanka muqaawamada Islaamiyiinta ilaa nabad lagu soo celinayo dalka Geeska Afrika. Addis Ababa waxay Arbacadii June 3, 2009 qiratay in xubno ka tirsan milatarigeeda in ay "baaritaan sahan" ka fuliyeen gudaha dalka deriska la ah ee Soomaaliya. Sidaas waxaa qortay Reuters. Khudbadii Sh. Shariif u jeediyey Ahlu Suna ama soo rogo.